Floyd Mayweather ရဲ့ ကားများ | CarsDB
Floyd Mayweather ရဲ့ ကားများ
(3.5.2015) ရက်နေ့မှာ ထိုးသတ်ခဲ့ကြတဲ့ Floyd Mayweather နဲ့ Manny Pacquiao တို့ ထိုးသတ်ခဲ့ကြတဲ့ လက်ဝှေ့ပွဲမှာ Mayweather က အမှတ်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပြီး လက်ဝှေ့ပွဲစုစုပေါင်းဝင်ငွေ ဒေါ်လာသန်း (၃၀၀) ခန့်ရဲ့ 60% ရရှိခဲ့ပါတယ်.။ Mayweather ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဝင်ငွေအများဆုံးရရှိတဲ့ အားကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကားများ၊ private jet နဲ့ အခြားပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူစုဆောင်းရာမှာလဲ နာမည်ကြီးသူဖြစ်ပါတယ်.။ သူစုဆောင်းထားတဲ့ ကားများကို စုစည်းပြီး MyanmarCarsDB ပရိသတ်များအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.။
E. Floyd Money Mayweather — net worth est. $280 million.
Floyd Mayweather ရဲ့ Bentley Mulsanne ကားဖြစ်ပါတယ်.။
Floyd Mayweather ရဲ့ Rolls Royce Drophead ဖြစ်ပါတယ်.။
Floyd Mayweather စီးနင်းတဲ့ Ferrari 599 ဖြစ်ပါတယ်.။
Ferrari 458 ပါ.။
သူ့မှာ Rolls Royce Phantom တွေလဲ ရှိပါတယ်.။
Mercedes-Benz S600 ဖြစ်ပါတယ်.။
Lamborghini Aventador လဲ ရှိပါသေးတယ်.။
သူ့သားရဲ့ ၁၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် Bentley Golf Cart တစ်စီးဝယ်ပေးခဲ့ရာမှာ ကားတစ်စီးလုံးကို ရွှေချထားတာဖြစ်ပါတယ်.။
Mayweather ရဲ့ အခြားကားများဖြစ်ပါတယ်.။
(3.5.2015) ရကျနမှေ့ာ ထိုးသတျခဲ့ကွတဲ့ Floyd Mayweather နဲ့ Manny Pacquiao တို့ ထိုးသတျခဲ့ကွတဲ့ လကျဝှပှေဲ့မှာ Mayweather က အမှတျနဲ့ အနိုငျရခဲ့ပွီး လကျဝှပှေဲ့စုစုပေါငျးဝငျငှေ ဒျေါလာသနျး (၃ဝဝ) ခနျ့ရဲ့ 60% ရရှိခဲ့ပါတယျ.။ Mayweather ဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ ဝငျငှအေမြားဆုံးရရှိတဲ့ အားကစားသမားတဈဦးဖွဈပွီး ကားမြား၊ private jet နဲ့ အခွားပစ်စညျးမြားကို ဝယျယူစုဆောငျးရာမှာလဲ နာမညျကွီးသူဖွဈပါတယျ.။ သူစုဆောငျးထားတဲ့ ကားမြားကို စုစညျးပွီး MyanmarCarsDB ပရိသတျမြားအတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ.။
Floyd Mayweather ရဲ့ Bentley Mulsanne ကားဖွဈပါတယျ.။
Floyd Mayweather ရဲ့ Rolls Royce Drophead ဖွဈပါတယျ.။
Floyd Mayweather စီးနငျးတဲ့ Ferrari 599 ဖွဈပါတယျ.။
သူ့မှာ Rolls Royce Phantom တှလေဲ ရှိပါတယျ.။
Mercedes-Benz S600 ဖွဈပါတယျ.။
Lamborghini Aventador လဲ ရှိပါသေးတယျ.။
သူ့သားရဲ့ ၁၅ နှဈပွညျ့မှေးနအေ့တှကျ Bentley Golf Cart တဈစီးဝယျပေးခဲ့ရာမှာ ကားတဈစီးလုံးကို ရှခေထြားတာဖွဈပါတယျ.။
Mayweather ရဲ့ အခွားကားမြားဖွဈပါတယျ.။
Posted at: 04-05-2015 10:47 AM